ကြံ.ဖွံ့ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးပေးမည့် ပြည်သူ့ စစ် မွမ်းမံ သင်တန်းပြုလုပ် | Home
« ကျေးရွာအာဏာပိုင်များက တံတားပြုပြင်စရိတ် မထည့်ဝင်နိုင် သူများထံ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ သိမ်းယူ
အဲန်ပီပီ ခေါ် မရာမျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားပြု ပါတီတရပ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ် »
ကြံ.ဖွံ့ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးပေးမည့် ပြည်သူ့ စစ် မွမ်းမံ သင်တန်းပြုလုပ်
May 1, 2012 by khonumthungburmese ၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၀၊ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီက၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း(ကြံ.ဖွံ.) အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ လုပ်ဆောင် ပေးမည့် ပြည်သူ့စစ်မွမ်းမံသင်တန်းကို လွန်ခဲ့သည့် မတ်လကစပြီး ပြုလုပ်ပေးနေသည်ဟုသိရသည်။
“ပြည်သူစစ်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူတွေကို မွမ်းမံသင်တန်းဆိုပြီး ပြန်ခေါ်တယ်၊ အဓိက ကတော့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ အနိုင် ရရှိဖို့ သင်တန်းသားများက တာဝန်ယူစည်းရုံးရမယ်လို့ သင်တန်း ဆရာတွေက ပို့ချတယ်လို့ ကြားသိရတယ် ”ဟု မင်းတပ်မြို့နေ ဆလိုင်း ထန်းလိန်း ကပြောသည်။
အဆိုပါ မွမ်းမံသင်တန်းနည်းပြဆရာများအဖြစ် မင်းတပ်မြို. အခြေစိုက် ခလရ ၂၇၄ တပ်ရင်းမှ တာဝန် ယူထားပြီး သင်တန်းတွင် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးအပါအဝင် အခြေခံစစ်သင်တန်း များကိုလည်း ပြန်လည်ပို့ချ သည်ဟုသိရသည်။
“ခလရ ၂၇၄ က တပ်ကြပ်ကြီးတွေ၊ တပ်ကြပ်တွေက စစ်သင်တန်းကို ပေး တယ်၊ သေနတ် ပစ်၊ ဖြုတ်၊ တပ်၊ လက်ပစ်ဗုံးပစ်နည်း တွေပါ တယ်၊ သင်တန်းသား ၅ဝ ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်” ဟု မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
ယခင်ပြည်သူစစ်သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသားများအား ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စား စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူပြုလုပ်ခဲ့ သော်လည်း ယခု သင်တန်းကို မူ သင်တန်းသားများမှ တစုံတရာ ကျခံခြင်းမရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။
အလားတူ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့တွင်လည်း အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ် မွမ်းမံသင်တန်းကို လာမည့် မေလ အတွင်း ပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း ဟား ခါးဒေသခံတဦးကဆိုသည်။
စစ်အစိုးရ၏ အရံအင်အားဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းသည် ၂ဝ၁ဝ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံပါတီအနေဖြင့် ပြောင်းလည်းပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ် နေသော်လည်း ယခုချိန်ထိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို. မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။